Rohingya Students Forum: ဒု-ရဲမှူးကြီး ဦးကျော်ဇောအောင်
ပုံ- ဒုရဲမှူးကြီး ဦးကျော်ဇောအောင်
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးကျော်ဇောအောင် (ခ) ဦးဘော်နီအာမီးန် သည် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့တွင် ဒုတိယရဲမှူးကြီး အဆင့်ဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုခေတ်က ရဲမင်းကြီး ဦးကျော်ဇောအောင်ဟု ကျော်ကြားခဲ့သူဖြစ်သည်။ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးထဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၌ အမြင့်ဆုံးရာထူးကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
ဦးကျော်ဇောအောင် သည် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်မှ မြို့နယ်သမ၀ါယမဦးစီးမှူး ဦးထွန်းစိန် (ကွယ်လွန်) ၏ ညီအရင်းဖြစ်ပြီး၊ Rohingya Blogger/Rohingya Today တည်ထောင်သူ ဦးဘစိန်၏ ဦးလေးအရင်း ဖြစ်သည်။ ရိုနေဆန်းလွင်နှင့် ကိုဇေအဏ္ဏ၀ါတို့၏ အဖိုးလည်းဖြစ်သည်။
၎င်းသည် မောင်တောမြို့နယ်မှ စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး၊ မောင်တောမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်၊ အထူးသတင်းတပ်ဖွဲ့၊ ၀န်ကြီးများရုံး၊ ကျိုင်းတုံ၊ မန္တလေး၊ ကျောက်ဖြူ၊ မြောင်းမြ၊ ပခုက္ကူ၊ မကွေး စသည့်မြို့များတွင် ရာထူးအဆင့်ဆင့်ဖြင့် နိုင်ငံ့တာဝန်ကို ကျေပွန်အောင် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ ရန်ကုန်မြို့ အင်းစိန် စီအိုင်ဒီ (CID) ထောက်လှမ်းရေး ဌာနချုပ်တွင်လည်း ဒုတိယရဲမှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
ဒုတိယရဲမှူးကြီး ဦးကျော်ဇောအောင်ကို ထောက်လှမ်းရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မလေးရှား၊ ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ စင်ကာပူအပါအ၀င် အခြားနိုင်ငံများစွာသို့ လေ့လာရေးခရီးများအဖြစ် နိုင်ငံတော်က စေလွှတ်ခဲ့သည်။
၎င်းသည် ဒုတိယလုံခြုံရေးမှူး၊ လုံခြုံရေးမှူး၊ အမှုစစ်အရာရှိ၊ ဒုတိယကြီးကြပ်ရေးမှူး၊ ၀န်ထောက်၊ တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ ရုံးအဖွဲ့မှူး၊ သင်တန်းမှူး စသည့် အဆင့်ဆင့် ရာထူး တာဝန်များကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
ဦးကျော်ဇောအောင်သည် တိုင်းပြည်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရင်း မိမိလူမျိုး၏ အမျိုးသားရေးတာဝန် အမျိုးမျိုးကိုလည်း ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ၎င်းနှင့်အတူ ဦးလှမောင်၊ ဦးချစ်လွင်၊ ဦးဘထွန်း၊ ဦးဘမြိုင် စသည်ပုဂ္ဂုလ်ထူးတို့က အမျိုးသားရေးကို လက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
ရိုဟင်ဂျာကျောင်းသား/သူများအတွက် စကောလာရှစ် (ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး) အစီအစဉ်ကို စတင်ခဲ့သူများတွင် ဦးကျော်ဇောအောင်လည်း တစ်ဦးအပါအ၀င်ဖြစ်သည်။
မန္တလေးရဲသိပ္ပံတွင် ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီး ရာထူးဖြင့် ထမ်းဆောင်ရင်း ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။ ၎င်း၏ ရုပ်အလောင်းကို မန္တလေးမြို့ရှိ အုတ်ရှစ်ကုန်း သင်္ချိုင်းတွင် မြေမြှုပ်သဂြိုဟ်ထားသည်။
ကွယ်လွန်ချိန်တွင် သမီး (၃) ယောက်နှင့် သား (၂) ယောက် တို့ ချန်ရစ်ခဲ့လေသည်။
ဒု-ရဲမှူးကြီး၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ဂုဏ်ထူးဂုဏ်မြတ်ကြောင်းကို ရိုဟင်ဂျာ ပုဂ္ဂိုလ်ထူးများက အောက်ပါအတိုင်း မှတ်ချက်ပေးသည်။
“He was my political mentor. From 1967 to 1971, I was asafamily member of him. At that time he was at the Insein CID HQ as at second in change. The first men was U Shwe Thaing who is alsoaMuslim Kaman from Kyauk Pyu. As friend of my father, I also visited frequently U Shwe Thaing House also. From U Kyaw Zaw Aung I had able to learn many things about Burmese political set up and administration set up and from U Shwe Thaing I had able to learn about history, leader ships and activities of Rakhine armed groups. I was lucky enough to get both of them. I will never forget both of them.”
-Aman Ullah (သမိုင်းသုတေသီ)
“I heard about him since my young age. He may be my father's jr. officer as Imam Hussain (USA). But his wife was my school mate at Buthidaung State High School. All are my relatives. I love and respect all of them. I called Mr.Yusuf Sab as Dada as my dad regarded him as his uncle. U Shwe Bin (Ali Johar) was also his relative.”
-Saya Gyi Abul Foyas (AFK. Jilani)
“He is boni Amin.
သူရဲ ကဗာရ်က အုတ်ရှစ်ကုန် ကဘာရ်စတန် တွင် ယနေ့တိုင်ရှိနေသည်။”
“ကျွန်တော့်မှာ ရေးစရာတွေ အများကြီး ကျန်နေပါသေးတယ်။ ဆောင်းပါးရှည်ရေးဖို့ ဒေတာတွေ စုနေပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာကျောင်းသားတွေကို စကောလာရှစ် စတာမှာ ဖိုးလေး ဦးကျော်ဇောအောင်လည်း ပါခဲ့တယ်။”
-ရိုနေဆန်းလွန် (Rohingya Blogger)
“ဦးကျော်ဇော်အောင်သည် အမျိုးသားရေးကိုလည်း တဖက်တလမ်းမှ ဆောင်ရွက်ခဲ့သူ တစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်၊ သူနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့သူများမှာ တက္ကသိုလ်ဖက်မှ ဦးလှမောင်၊ ဦးချစ်လွင်၊ ဦးဘထွန်း၊ ဦးဘမြိုင်တို့ကို မှတ်မိသည်။”
“ကျနော့် ဒါဒါ(အဘိုး)အရင်း ... ဦးကျော်ဇောအောင် ... သူ့ခေတ်သူ့အခါမှာ တော်တော် လေးစားဖို့ကောင်းတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ... လာဘ်လုံးဝမစားဘူး ... လက်ရှိ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် အရာရှိအတော်များများ ကျနော့်အဘိုး တပည့်တွေများပါတယ် ... အဲဒီခေတ်မှာ သူ့အဆင့်က ရဲ ဒုတိုင်းမှူး နဲ့ အဆင့်တူပါပဲ။”
အထက်တွင် ဒု-ရဲမှူးကြီး၏ ဂုဏ်သတင်းအချို့ကိုသာ စာဖတ်ပရိတ်သတ်တို့ ဖတ်ရှုနိုင်အောင် ဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံနှင့် လူမျိုးအတွက် လူအား၊ ဉာဏ်အားနှင့် စွန့်စားခဲ့သော ဒု-ရဲမှူးကြီး၏ စေတနာသည် အစားမထိုးနိုင်လောက်အောင် ကြီးမားလွန်းလှပေသည်။
ရိုနေဆန်းလွင်- FB post
Posted by Rohang king at 1:38 AM
Labels: ရိုသမိုင်း, ရိုကျော်, politic, well-known